online fifandraisana eo amin’ny Aterineto
Ny Aterineto, izay niseho tsy ela loatra, amin’izao fotoana izao dia lasa fotsiny ny tena zava-dehibe amin’ny sehatra rehetra ao amin’ny fiainany (farafaharatsiny, zato taona lasa izay, ny Aterineto no tsy marina, ary telo-polo taona lasa izay ny solosaina dia tsy mbola nisy zava-baovao, tsy lazaina intsony ny Aterineto). Mila mahita zavatra na hahalala ny sasany vaovao. Ny fomba tsotra indrindra mba hahazoana ny Internet.
Misy mila mitady asa
Ny Aterineto dia hanampy amin’ny ity raharaha ity. Ao amin’ny Internet dia afaka mahazo saika ny vaovao rehetra sy ny misy asa fanompoana ao amin’ny Internet, ary manomboka ny Fiarahana.
Raha ny tena izy, indrindra ny tambajotra sosialy dia mikendry ny azy ny Fiarahana ary amin’ny chat. Fa misy manokana Mampiaraka toerana izay afaka miezaka ny mahita ny mpiara-miasa tsara, ka hiady, na mpihambo ho ny andraikitry ny vadinao.
Raha ny tena izy, talohan’ny lalao notendrena ny matchmaker, izay naka mety mifanandrify mpivady, ary nampidirina. Fa ankehitriny ny momba ny matchmakers nitolo-batana ankapobeny ny toerana, satria izany anjara tsy tsikaritra loatra aza ny fandraofana rehetra toy izany koa ny Internet.
Nahoana ny olona, anisan’izany ny tanora, no mitady ny roa eo amin’ny Aterineto. Hita vitsivitsy ny antony.
Voalohany sy lehibe indrindra amintsika dia ny tsy fisian’ny fifandraisana velona. Amoron-dalana, eo anatrehan’ny vahoaka, ny namana, izay tsy voafetra ny mahita ny mpivady no olana. Ankehitriny, sarotra ny hitombo ho toy ny hakitroky ny fiainana mitombo, araka ny hoe: tsy amin’ny andro fa amin’ny ora. An-trano-miasa, miasa an-trano izany teny mampihetsi-po indrindra ny mpiara-belona, tsy manana saika na inona na inona mihoatra noho izany. Ary raha ny asa ny ankamaroany mpikambana ao amin ny firaisana ara-nofo.
Tsara, tsy eny an-dalambe mba hahafantatra
Mainka fa ny olona ankehitriny ny fotoana rehetra, ny rivotra sy maika, tsy nahatsikaritra tsy inona ny olona, fa matetika ny fotoana ny taona.
Tonga, farany, ny tompon-tany fandriana, na dia ny tanora matetika dia tsy te handeha na aiza na aiza, ary hihazona ny solosaina totozy, mora mandray namana ho azy ireo ny tontolo virtoaly.
Indrisy anefa, ny maro amin’izao fotoana izao ny tanora fotsiny ny olona tsy mahalala ny fomba fifandraisana (ary indrindra ny Fiarahana) tsy an-tserasera, fa eo amin’ny fiainana tena izy. Na dia ho an’ny tanora maro dia mora kokoa (ary tena mora kokoa) mba hihaona sy hiresaka amin’ny olona iray ao amin’ny tambajotra sosialy noho ny amin’ny tenako tokotany.
Na tiantsika na tsy, fa ny zava-misy fa maro ny tanora sy ny tanora amin’ny chat velona fotsiny hafahafa sy tsy mahazatra. Fa mihoatra noho ny somary tery faribolana ny namany any am-pianarana ny fiainana matetika dia tonga teo amin’ny tontolo virtoaly, izay Mampiaraka, ary chat tena mora kokoa (amin’ny kely indrindra ho an’ny tanora maro). Ary ny Internet no ho tonga ho an’ny olona maro ny toerana tsy afa-tsy ny fitadiavana asa na ny tsara ny vokatra, fa koa ny toerana ny fitadiavana namana, na dia ny fiainana mpiara-miasa
← Antony fifandraisana lehibe